IWatchtower Farms: Ipulazi Elinikeza Izigidi Zabantu Ukudla
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine Isi-Urdu Isi-Uzbek IsiBhunu IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNahuatl (Saphakathi Nezwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPedi IsiPersia IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu Uzbek (Roman)
Eminyakeni engu-40 edlule, ngo-February 2, 1973, kwafakwa imishini emisha yokunyathelisa eWallkill, eNew York, e-U.S.A., ukuze kukhiqizwe INqabayokulinda ne-Phaphama!
Eminyakeni eyishumi ngaphambi kwalokho, oFakazi BakaJehova babethenge indawo eyipulazi lapho ukuze bakhiqize ukudla kwezisebenzi zasendlunkulu eBrooklyn, eNew York. Kodwa manje, le ndawo isizosetshenziselwa ukukhiqiza olunye uhlobo lokudla, ukudla okungokomoya.—Mathewu 24:45-47.
IWatchtower Farms, eWallkill, eNew York, ngasekuqaleni kwawo-1970
UPhilip Wilcox, ngaleso sikhathi owayengumqondisi emshinini wokunyathelisa, ukhumbula okwenzeka ngosuku lokuqala besebenzisa imishini yokunyathelisa eWallkill: “Cishe kwasithatha inyanga yonke ukuba sixhume leyo mishini enejubane elikhulu yokunyathelisa. Lapho isixhunyiwe, sabe sesihlola ukuthi iyasebenza yini. Ngokushesha sabe sesinomagazini abayizinkulungwane ezimbalwa. Sabathumela emnyango wokunyathelisa eBrooklyn ukuze basetshenziswe lapho kwenziwa ama-oda amabandla. Sasingafuni kulahlwe ngisho nowodwa wabo.”
OFakazi BakaJehova bakhe lesi sakhiwo esisha sokunyathelisa ukuze basekele umsebenzi wabo omkhulu wokunyathelisa obulokhu wenziwa eBrooklyn. Ngasekuqaleni kwawo-1970, isidingo sokunyatheliswa kwezincwadi zeBhayibheli besilokhu sikhula, kudingeke kusetshenzwe isikhathi esingaphezu kwesosuku oluvamile, ngakho umnyango wabanyathelisi eBrooklyn waqala ukuba namashifu asebusuku ukuze kuhlangatshezwane nesidingo sezincwadi ezi-odwayo.
Phezulu: Kufakwa umshini wokuqala wokunyathelisa we-M.A.N. eWallkill, ngo-January 1973. Ezansi: Kufakwa iphepha emshinini we-M.A.N.
Lapho isakhiwo sokuqala sokunyathelisa eWallkill siqeda ukwakhiwa, sasinemishini emine yokunyathelisa, indawo yokuthutha neHholo LoMbuso. Nokho, ngaphambi kokuba sisetshenziswe ngokuphelele, kwakhiwa esinye isakhiwo esikhudlwana eceleni kwalesi sokuqala. Isidingo sezincwadi zeBhayibheli sasisikhulu kangangokuba kwafakwa imishini yokunyathelisa eyisithupha esakhiweni sesibili ngisho nangaphambi kokuba siqedwe ngokuphelele ukwakhiwa.
Phakathi neminyaka edlule, ubuchwepheshe ekunyatheliseni buye bathuthuka futhi isidingo sezincwadi zeBhayibheli siye sakhula. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezilethwa yilolo shintsho, kwadingeka sishintshe imishini esetshenziswayo futhi sikhulise indawo yokunyathelisa eWallkill izikhathi eziningana. Ngawo-1980, kwafakwa imishini yohlobo lwe-offset enyathelisa ngejubane elikhulu esikhundleni semishini yakudala.
Ngo-2004 isakhiwo sokunyathelisa saseBrooklyn savalwa, kwathi ngokokuqala ngqa, izincwadi zaqala ukunyatheliswa eWallkill. Ngo-2010, umsebenzi wokunyathelisa omagazini waphinde wathuthelwa enyakatho, manje usuya ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova laseCanada. Umshini omusha wakhona unyathelisa omagazini abangu-200 000 ngehora.
Phezulu: Kulungiselelwa ukufaka ama-signature emshinini waseWallkill wokuhlanganisa izincwadi, ngo-2005. Ezansi: IWatchtower Farms, eWallkill, eNew York, ngo-2013
Namuhla, isakhiwo sokunyathelisa eWallkill sinemishini esezingeni eliphezulu futhi sinezisebenzi ezikhuthele ezingu-281 zabesilisa nabesifazane. Ngonyaka odlule, kunyatheliswe izincwadi namaBhayibheli angaphezu kwezigidi ezingu-17 khona. Ngaphezu kwezakhiwo zokunyathelisa eziseWallkill naseCanada eNyakatho Melika, oFakazi BakaJehova banezindawo zokunyathelisa ezingu-13—e-Afrika, e-Asia, e-Australia, eNingizimu Melika naseYurophu​—ezinakekela izidingo ezingokomoya zezigidi zabantu.—Mathewu 5:3.
I-Watchtower Farms​—Iminyaka Engu-50 Yomsebenzi Wokuvuna
Funda ukuthi le ndawo iye yashintsha kanjani eminyakeni edlule ukuze ithuthukise umsebenzi woFakazi BakaJehova wokufundisa emhlabeni wonke.
IJapane Nayo Isinyathelisa AmaBhayibheli Oqwembe Oluqinile
Kufakwe umshini omusha esakhiweni sokunyathelisa soFakazi BakaJehova eJapane. Funda okwengeziwe ngawo.
Bheka intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokunwetshwa kwezakhiwo zegatsha loFakazi BakaJehova e-Wallkill, eNew York, e-U.S.A.
Bukela iziqeshana ze-video zalokho okusanda kufezwa esakhiweni saseWallkill.
Thumelela Thumelela Ipulazi Elinikeza Izigidi Zabantu Ukudla